DHAGEYSO:Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in deegaanada Maamulkaas ay xaalad khatar ah ka jirto | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in deegaanada Maamulkaas ay xaalad khatar ah ka...
DHAGEYSO:Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in deegaanada Maamulkaas ay xaalad khatar ah ka jirto
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in xaalad aad u daran ay xilligan kajirto Gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan Magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay uu Wabiga Shabeelle aad uga fatahayay.
Cali Guudlaawe oo dib ugu laabtay shalay Magaalada Jowhar ayaa Sheegay in fatahaaduhu aad u sameeyeen dadka ku nool Gobolka Shabeellaha dhexe, sidoo kalena ay dareemayaan xaalad adag, isla markaana dalagyadii beeraha ay baabi’iyen Biyaha fatahaada Wabiga ah.
Waxaa uu ku baaqay in si deg deg ah wax looga qabto loogana hortago fatahaada, isagoo Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe ugu baaqay inay wax ka qabtaan dhibaatada kajirta Magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimada.
Hadalka Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Magaalada Jowhar ay gashay xaalada Go’doon ah, isla markaana wax gaadiid ah aysan Magaaladaas galayn kana soo baxeyn ka dib markii Xaafadaha qaar ee Magalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga uu ku fatahay Wabiga shabeelle.
Dhanka kale Hay’adda Cuntada iyo Beeraha Q.M ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo Soomaliya ku wajahan, maadaama roobab Mahiigaan ah laga cabsi qabo inay buux-dhaafiyay wabiyada Soomaaliya Mara.
Waxay sidoo kale sheegtay Hay’adu in roobabkii ka da’ay dhulka buuraaleyda ah Ethiopia ay daadadkoodu ku soo qul-qulayaan Soomaaliya, kuwaasoo saameyn kara magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha hoose.
Hay’adu waxay sheegtay inay Xaalada Halis ka sii dhigi karaan biyo-xireenka iyo qararka wabiga oo daciif ah, durbana fatahaad ku billaabay Magaalada Jowhar,Bulshooyinka ku nool hareeraha wabiga Shabeelle ayaa laga codsaday inay taxadaraan, maadaama qul-qulka Biyaha la fiłayo inay soo dhaafaan jiinka wabiga dabayaaqada todobaadkan.
Inkasta oo 24-kii saac ee la soo dhaafay ay kordheen biyaha wabiga Jubba, hadana FAO waxay sheegtay in khatarta fatahaadda ay ka jirto degmooyin ay ka midtahay Dooloow.
Bilowgii roobaka Mahiigaanka ah ee ka da’aya Soomaaliya waxaa ka dhalatay saamayn naf iyo Maalba leh
Qoyska ka mid ahaa dadka Barakacayaasha ah ee ku noolaa Kam barakac oo ku yaal agagaarka Jaamacadda Shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho ayaa Xalay ku dhintay darbi ay Biyuhu soo dumiyeen oo ay markii hore Roobka uga okoranayeen.
Hooyo,Shan Caruur ah oo ay dhashay & Cunug kale oo la joogay reerka ay musiibadu ku dhacday ayaa isla Goobta ku dhintay halka ugu ayraan 3 Qof oo kalenaya dhaawacyo soo Gaareen.
Marka ay roobabka Mahiigaanka ah ka da’ayaan Magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxay Saamayn ka Soo kaartaa dadka danyarta ah ee eek u nool Caasimada kuwaasoo aysan Guryahoodu ahayn kuwa adag ama Biyaha roobka ka Celinkara.
Maalmo ka hor ayay ahayd Marki biyo qaadaan Caruur tiradoodu gaaraysay ilaa 11 oo 5 ka mid ah ay isku qoys ahaayeen kana soo jeeda Qoysaska danyarta ah.
Qaar ka mid ah Waalidiintuu Caruurtooda ku waayay Roobabkii Mahiigaanka ahaa ee Muqdisho ka da’ay habeen hore ayaa warbaahinta la hadlay.
Dhanka kale Wararka ka imaanaya deegaanka Qodqod ee ka tirsan Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Roobab Xooggan oo Xalay halkaas ka da’ay ay Sababaeen bur bur hantiyadeed Ateenada shirkada isgaarsiinta ayaa lagu soo waramayaa inay ku dul dhacday Guryo ay dad dagan yihiin waxaana jira guryo Roobabkii Xalay ku dumay.
Previous articleDHAGEYSO:Cabasho ka soo yeeraysa dadka qabo xanuunka kalyaha ee Wajeer
Next articleDHAGEYSO:Kismaayo oo laga dareemayo u diyaar garowga ciidda